Daryeelka yaanyo | January 2020
Ugu Weyn Ee Daryeelka yaanyo
Goorta ay ku quudiyaan geedo yaryar iyo sida loo sameeyo
Ujeedada beeritaanka yaanyo waa, dabcan, miro ay, kuwaas oo bannaanka u fiirsada inta ugu badan. Si kastaba ha ahaatee, waa in la fahamsan yahay in for goosashada wanaagsan, marka hore oo dhan, waxaa haboon in ay sii kordhaan geedo fiican, taas oo u baahan bacrimin joogto ah iyo haboon. Kordhinta dheeraad ah ee warshad this waxaa loo baahan yahay had iyo jeer, sidaas darteed, hoos ku xusan waxaan tixgelinaynaa nooca bacriminta aad u baahan tahay si ay u quudiyaan yaanyada.
Sida loo siiyo qudaarta, yaanyada bacriminta ka dib beerashada dhulka
Marka koraayo yaanyada, shaqada ugu weyn ee ninkii beerta ka shaqaynayay waa in la helo geedo tayo sare leh. Si kastaba ha ahaatee, si ay u helaan duurka yaanyo fiican geedo, waxay weli u baahan tahay inay bixiso daryeelka lagama maarmaanka ah, iyo gaar ahaan quudinta joogto ah. Sidaa darteed, hoos ku xusan waxaan ka hadli doonaa sida loo quudiyo yaanyada ka dib markii laga beerto dhulka, marka la sameeyo iyo sida.
Sida loo abuuro yaanyada aqalka lagu koriyo, iyo sababta ay tahay in loo qabto
Tilling tilling waxay ka caawisaa hagaajinta dhalidda ee khudradda iyo difaac ka cudurada kala duwan. Laakiin si loo helo habka loo filayo natiijooyinka laga filayo, waa in uu ogaado goorta iyo habka loo fulin karo habkaan si sax ah si loo siiyo dhirta nafaqooyinka lagama maarmaanka ah. On sida loo dhigo yaanyada ee lagu koriyo, waxaan sii sheegi doonaa dheeraad ah.
Khariidad sida bacriminta for yaanyada
Maydhku waa wax caadi u ah cuntadeena. Waxaan si joogta ah ugu cunnaa alaabta la dubay, rootiga, kvass, iyo weliba cuntooyin kale. Xaqiiqdii, yeeyaalku waa fangaska hodan ku ah borotiinka, birta, macro- iyo miiqyada iyo asiidhyada amino. Ma taqaanaa? Miyuusigu waa il heer sare ah oo bakteeriyada dabiiciga ah oo xoojin kara xoojinta dhirta iyo waa dabeecada dabiiciga ah ee difaaca jirkooda.
Fungicide "Kvadris": tilmaamaha isticmaalka daroogada
Aad bay u adagtahay in la helo goosashada wanaagsan iyada oo aan la isticmaalin diyaarinta fungicidal wax ku ool ah oo loogu talagalay ma aha oo kaliya la dagaallanka cudurrada, laakiin sidoo kale ka hortagga muuqaalka. Waa qalab lagama maarmaan ah oo waa "Kvadris" - fungicide, tilmaamo loogu isticmaalo taas oo aan ku sharxeyno maqaalka hoose.
"Lazurite": tilmaamaha isticmaalka daroogada ee cawska
Kiimikooyinka, oo lagu magacaabo magaca cagaarka, ayaa bani-aadminimo ku filan si ay u burburiyaan dhammaan dhirta ku yaalla meeraha. Tani waxay hoosta ka xariiqeysaa baahida loo qabo in si taxadar leh oo taxadar leh ula qabsashada wakiillada marka la codsanayo. Hawlaha beeraha, herbicides ee tallaabo xulasho (xulasho) ayaa loo isticmaalaa, taas oo kuu ogolaaneysa inaad si guul leh ula macaamilato tiro badan oo caws.
Sida loo beero yaanyada, iyadoo la adeegsanayo habka Terekhin
Bannaanka u badan iyo bannaanka u hibada ayaa si joogto ah u raadinaya siyaabo cusub oo loo horumariyo dalagyada qaarkood, sidaas darteed ma aha la yaab leh in beerista yaanyada by habka of Terekhina helay heshay ballaaran. Waa in la ogaadaa in ay jiraan fikrado kala duwan oo ku saabsan arrintaan, iyo in beeralay qaar ka mid ah ku ammaanaan habka iyo xusuusin natiijooyinka wanaagsan ee isticmaalka, kuwa kale waxay la yaaban yihiin waxa gaarka ah oo ku saabsan technology this.
Sidee si habboon iyo inta jeer ee ay u yareeyaan yaanyada dhulka furan
Tamaandhada waxaa loo tixgeliyaa dhir aan qabyo ahayn oo midho dhalin kara xitaa maqnaanshaha dareenka qofka mulkiilaha ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hal "laakiin" - si loo siiyo dhalidda ugu sareysa kaliya dhirta, taas oo ay jirto daryeel habboon. Markaasaa yaanyo waxay u baahan tahay wax kasta oo dhexdhexaad ah - ku filan horumarinta caadiga ah ee waraabinta iyo bacarimiso.
Moobeyl yaanyo leh boric acid: sida iyo sababta loo baari karo yaanyada
Si ay u koraan yaanyada xagaaga xagaaga, ma aha lagama maarmaan in waqti badan la qaato. Si geedo tayo sare leh, waa ku filan inaad iibsato abuurka, iyo si taxadar leh, ka dib, waxaad heli doontaa goosashada hodan ah. Aan aragno sida xalka boron loo isticmaalo dhirta. Shaki la'aan, buufinta ubaxa waxay ilaalin doontaa midhaha cudurada kala duwan.
Tilmaamaha loo isticmaalo daroogada "Bitoxibacillin"
Sida noolaha nool, dhir ayaa jiran kara oo u baahan daaweyn. Cudurada kala duwan waxay keeni karaan bakteeriya, fangaska iyo cayayaanka. Waxaa jira cayayaanka badan oo jecel inay cunaan dhirta. Qaar waxay doorbidaan xididada, caleemaha kale iyo burooyinkeeda. Qaar ka mid ah waad arki kartaa, kuwa kalena lama heli karo.
Yaanyada Mulching ee lagu koriyo, sida loo helo dalag weyn oo yaanyo
Horumarinta yaanyada ee lagu koriyo, waxaad ku guuleysan kartaa Bisaylkiisa hore, iyo sidoo kale yareynta khatarta dhimashada abuurka laga soo bilaabo dhaxan iyo cudurada fungal. Si kastaba ha ahaatee, xitaa sii kordhaya khudradda ee lagu koriyo ah waxay u baahan tahay tallaabooyin si loo abuuro xaaladaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay. Yaanyada Mulching ee lagu koriyo ah waa farsamada agrotechnical loo baahan yahay si loo dedejiyo habka of Bisaylkiisa dalagga iyo kordhiyaan tirada.
Miyuu suurtogal ah in uu kobciyo yaanyada oo aan la waraabin
Internetka waxaa jira siyaabo badan oo ay u kobcin yaanyo. Geed kasta oo dhirta khudrawaatka leh waxay doonaysaa inay hesho hab lagu soo saari doono waxtarka ugu sarreeya qiimaha ugu hooseeya. Sanadihii la soo dhaafay, qaar badani waxay kor u qaadaan beerashada yaanyo iyaga oo aan waraabiyo. Aan aragno waxa habkani yahay.
Dharka ugu fiican ee geedo yaanyada iyo basbaaska
Tamaandho iyo basbaas waxay ka mid yihiin dalagyada beerta ugu caansan, kuwaas oo laga heli karo meel kasta oo ka mid ah. Waxay yihiin dhadhan fiican oo leh qadar badan oo fiitamiin ah oo ay u baahan yihiin jidhkeena. Si aad u hesho taajir iyo tayo sarre leh oo khudraddaas ka mid ah, waxaa muhiim ah in aan si sax ah u beerin, laakiin bacriminta si habboon u bisil.
Sidee iyo sababta ay u yareeyaan yaanyada ee lagu koriyo polycarbonate
Tamaandho, miro khaas ah oo ka mid ah dhammaan Koonfurta Ameerika, ayaa caan ku ah sabab wanaagsan. Maaha oo kaliya macaamiisha yaryar iyo macro ee faa'iido leh, fiitamiinada iyo antioxidants, laakiin sidoo kale "saaraa" xinjirta "thrombosis", xiidmaha mindhicirada iyo xididdada dhiigga, waxay faa'iido u tahay nidaamka wadnaha iyo xoojinta nidaamka difaaca. Laakiin haddii aad ka fekereyso sariirahaaga yaryar, waa inaad xasuusnaataa awooddooda.
Sidee iyo sababta ay u yareeyaan yaanyada dhulka hoostiisa
Dhaqan ahaan beeralayda oo dhan waxay ku hawlan yihiin dalagyada dalagyada leh ee koraya beerahooda beertooda mar walba sariirta u qoondeeyaan khudrado dhaqameed - yaanyo. Tani ma aha mid la yaab leh, sababtoo ah sii kordhaya miraha kuwan si madaxbannaan waa mid aad u xiiso leh. Noocyo aad u kala duwan - labadoodaba waa la foorari karaa. Goobta beertayadu waxay ku badan tahay dalagyo yaryar, oo siiya miraha waaweyn.
Intee jeer ayay biyo u yareeyaan yaanyada aqalka dhirta lagu koriyo si ay u helaan goosashada wanaagsan
Marka koraayo tamaandhada lagu koriyo, waraabinta waa mid ka mid ah tallaabooyinka qallafsan ee ugu daran. Waxay ku saabsan tahay inaad dhirta dhirta khudradda si sax ah u hubiso in koritaankooda wanaagsan iyo goosashada wanaagsan ay ku xiran tahay. Iyada oo ku saleysan aragtida, bannaanka u soo saaray dhowr talooyin ku saabsan sida iyo marka ay ugu fiican tahay in la biyaha yaanyada ee lagu koriyo, iyo heerkulka qoyaanka waa lagama maarmaan u ah koritaanka caadiga ah.
Bacriminta for yaanyada ee lagu koriyo ah: inta lagu guda jiro beerashada iyo ka dib markii laga beerto
Beerta lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo, waxaan dooneynaa inaan helno goosan weyn oo isku mid ah si loo xaqiijiyo qiimaha beeraha. Bannaanka uqorshaha badan, iibsashada noocyo kala duwan oo wax soo saar leh, iloobin in Beelaha iyo noocyada leh dhalidda sare ay u baahan yihiin inay abuuraan xaalado ku haboon oo quudinta waqtigu si fiican u ciyaaraan.
Sida loo quudiyo yaanyada inta lagu jiro fruiting?
Mararka qaar waxay dhacdaa in khudaarta cagaaran ee wanaagsan ay u baahan yihiin gargaar yar. Tusaale ahaan, marka yaanyada ay bilaabaan inay midho u dhoofaan, waxay u baahan karaan quudin dheeraad ah: haddii ciidda la gooyo, yaanyada ayaa lagu koray goobta sannado badan ama wax la mid ah oo aan horay loo sii socon.
Iodine for yaanyada: isticmaalaan aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrinka bannaan
Beeraley kasta oo doonaya in uu helo goosashada hodan ah isaga ka, isaga oo yareynaya qadarka Nitrate loo isticmaalo. Qaar ka mid ah, waa arrin la yaab leh, halka kuwa kalena aysan rabin inay bixiyaan miraha iyo khudradda carruurtooda koray cayayaanka. In this article waxaan ku sharxi doonaa sida loo biyaha biyaha yaanyo leh.
Sidee loo sameeyaa duurka yaanyo (jeex jeexjeexay) dhul furan
U adeegidda waa mid ka mid ah tallaabooyinka gacan ka geysanaya kordhinta dhalidda ee yaanyada iyo samaynta miro weyn oo tastier ah. Ma jiro ninkii beerta ka shaqeyn lahaa oo aan samayn. Muxuu yahay nidaamkan iyo sida loo sameeyo - isku day inaad ogaatid. Waa maxay sababta yaanyada looxa loo jarjarey Pasony - tani waxay ka takhalusaysaa asliga ah ee dhirta laga bilaabo caleemaha dheeraadka ah ee udhaxeeya labada udhow.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daryeelka yaanyo 2020